Famaranana ny fankalazana ny Jobily Faha-60 Taonan’ny SAMPATI XIII – FJKM Ambavahadimitafo Famaranana ny fankalazana ny Jobily Faha-60 Taonan’ny SAMPATI XIII |
Famaranana ny fankalazana ny Jobily Faha-60 Taonan’ny SAMPATI XIII
A la une.SAMPATI
Publié le 12 octobre 2010 à 09:10
1°/ – FANOKAFANA: – Ny Alahady 04 Oktobra 2009 no nanombohana ny fankalazana tao amin’ny FJKM Ambavahadimitafo.
– Chef Predon RAHARIJAONA izay isan’ny nanorina voalohany ny Tily teto Ambavahadimitafo no Filohan’ny Komity, ary Charline RABENJAMINA, Haja RAMAROSON, Mamy ANDRIAMIHAMISOA, Léon Claude RAVELOARISON sy Mamy ANDRIANTSOA no Filoham-boninahitra izay nampatsiahy fa ny Pasitera Jean Baptiste RALAMBOMAHAY no isan’ny angady nananana sy vy nahitana ny fikambanana ny taona 1949 nanombohana izany.
– Fanateram-bokatra sy fiaraha-misakafo tao amin’ny Akany RALIBERA Daniel no niaraha-nientana teo amin’ny Amperinasa sy ny Tranainy mba hahazoana manomboka am-pirahalahiana ny Jobily.
2°/ – SORTIE: – Nanatanteraka fiivoahana an-tsaha tany Ambatomanga ny 28 sy 29 Novambra 2009.
– Ny firaisan-kina nisy teo amin’ny Komity sy ny commissions maro ary ny fifankatiavan’ny rehetra no nentina nanomana sy nahavitana ny Lasy.
– Nahafinaritra ny fiainana an-dasy fa samy nandray anjara mavitrika daholo na ny Amperinasa na ny Tranainy sy ny fianakaviany. Na nisy aza ny reraka dia mbola nahitana Mpanazava sy Tily Tranainy ary ireo zanany maharaka tsara ny fiainana an-dasy.
3°/ – CABARET: – Ny takarivan’ny Zoma 20 Aprily 2010 dia nanao fitadiavam-bola teny amin’ny Espace de Verre Ankorondrano.
– Ny Orchestre KORANA MOZIKA sy ny TARIKA FELANIARY, izay nahitana an’i JOHARY FELANIARY Tily Tranainy, no nanafana ny fotoana ary maromaro ny vola azo tamin’izany satria betsaka ny Amperinasa sy ny Tranainy no samy nanatanteraka tamim-pitiavana ny andraikitra isan-tsokajiny nankinina taminy avy.
4°/ – TOURNOI: – Nanao fifaninanana ara-panatanjahantena teny amin’ny Collège PAUL MINAULT Androhibe ny 29 May 2010.
– Ny sampana tanora maro tao am-piangonana no niara-nankalaza am-pirahalahiana ny Jobily tamin’izany.
5°/ – LASIN-JOBILY: – Tany ANDRANOKODITRA AKANY NY NOFY no natao ny Lasin-jobily ny 23 ka hatramin’ny 31 Aogositra 2010.
– Ny “ONG L’Homme et l’Environnement VOHIBOLA” no nanasa ny SAMPATI XIIIè ka ankoatra ny fiainana an-dasy dia nisy ny fitsidihana valan-javaboahary ary ny fambolen-kazo sarobidy sy ara-pahasalamana nandritra izany.
– Nisy ny fiaraha-miangona tao amin’ny FJKM Andranokoditra ka nandray anjara mavitrika tamin’ny fitarihana ny fotoana, ny fanolorana Raki-pisaorana, ny fanaovana toriteny an-kira ary ny fividianana ireo lavatntim-bokatra ny SAMPATI XIIIè ka ankoatra ny asa soa vita dia nanolotra fitaovana sy fitafiana ho an’ny Fokonolona ny Mpilasy.
6°/ – TSANGAMBATO: Seza vato tsara lehibe 4 eo an-tokontany no natolotra ny FJKM Ambavahadimitafo ny Alahady 03 Oktobra 2010.
– Fanomezana fanamiana ho an’ireo Amperinasa no ezaka nataon’ny Tranainy nanampiana ireo tsy nanana izany.
– Ny ambim-bola rehetra azo tamin’ny Jobily dia ho entina hanavaozana ny LOCAL SCOUT izay Tsangabaton’ny faha-50 taonan’ny SAMPATI XIIIè.
7°/ – VOKATRA: – Ny fanakalozana ireo vokatra no natao hahazoam-bola ho an’ny SAMPATI XIIIè namaranana ny Jobily.
8°/ – ISA: – Mpanazava sy Tily Amperinasa 140 sy Tranainy 120 eo ho eo no nifanerasera nandritra ny Jobily.
9°/ – FISAORANA: – Ny Komity dia maneho ny fisaorana feno ireo rehetra nanohana sy niara-niasa tamin’izao Jobily faha-60 Taona izao.
RAMBELOSON Andriamampianina (Ndrema), Chef d’Organisation Générale et Communication